Posted by Tranquillus | Aogositra 22, 2020 | Mipetraka sy miasa any Frantsa
Ny fanamarinana ny payslip isam-bolana, tena ilaina ve izy io? Tsy ilaina fotsiny io fa mihoatra noho ny ilaina. Misy lisitra lava be ny clumsiness matetika iarahana amin'ny payslips. Indrisy fa ny hadisoana dia mahazatra indrindra noho ny eritreretinao. Ny ampahatelon'ny mpiasa dia nilaza fa nahatsikaritra ny tsy fahatomombanana amin'ny payslip izy ireo tao anatin'ny 12 volana farany. Izany no mipoitra avy amin'ny a Fianarana IFOP notanterahina tamin'ny 2015 momba izany. Misy noho izany fotoana mety hahafaly anao amin'ity olana ity. Manana telo taona ianao hitaky ny volanao. Amin'ny toe-javatra izay misy hadisoana ao amin'ny fanoratanao ny payslip anao dia niteraka valim-bola tsy nomen'ny trosa aminao.
Zahao ny payslip manomboka amin'ny fahadisoana matetika
Ireto misy hadisoana mety hitanao amin'ny payslip-nao. Ny hadisoana rehetra nataony dia ny tsy fahampiana. Ny fahaverezan'ny vola azo isaina amin'ny tranga sasany. Raha tsy niadidy ny zokiolona ianao nandritra ny 10 taona. Avelako sary an-tsaina ny habetsaky ny vola very. Tsy lazaina hoe rehefa tonga ny fotoana, ny kajy ny fisotroan-dronononialinao fisotroan-dronono. Izay hiorina amin'ny loko payslips mahafinaritra. Ny orinasa sasany dia tsy manaja ny fifanarahana iombonana.
Ohatra ohatra amin'ny fanao ratsy miparitaka
Isan'ny laharana diso
Fikajiana diso ny isan'ny andro fialan-tsasatra
Manafintohina ny fandraisana anjara manontolo
Ny zokiolona dia tsy raisina anaty kajy ny karamanao
Adinadino ny tatitra momba ny fandoavana
Tsy mihatra ny fifanarahana iombonana
Faty ho an'ny fialana amin'ny aretina tsy voamarina
Lisitry ny teboka hodinihina manokana
Ny anarana sy ny adiresin'ny mpampiasa anao
Kaody NAF na APE
Famolavolana vatana izay manangona fanampiana ara-tsosialy amin'ny mpampiasa anao sy ny isa eo ambany fandoavana izany
Ny fifanarahana iombonana na fampahatsiahivana ny fepetra omen'ny mpiasa, momba ny faharetan'ny fandoavam-bola sy ny faharetan'ny vanim-potoana fampandrenesana raha toa ny famaranana ny fifanekena asa
Ny fisian'ny fahazoan-dàlana mandoa vola, RTT, fitsaharana amin'ny alina takiana ...
Fanambarana mamporisika anao hitandrina ny payslip tsy misy farany
2) Ny singa ho an'ny kajy ny karamanao
Ny anaranao sy ny toerana notazonao
Toerana nifanatontosa tamin'ny ambaratongam-pahefana momba ny fisokajiana mahazatra (M1, M2, OS5) ary ny firesahana momba ny fahombiazana
Daty sy ora maro niasana izay ifandraisan'ity karama ity
Ny tsy fitoviana eo amin'ny ora andoavam-bola amin'ny saram-piainana mahazatra sy ireo nitombo ny filazan'ny salan-taratasim-piainana ho an'ny vondrona tsirairay (ny ora alina, ny fotoana an-kiato, ny alahady, ny fialantsasatra amin'ny vahoaka)
Type sy ny haben'ny sakafo rehetra amin'ny karama karama (Jereo hoe inona marina no mahazo anao)
Ny fahazoan-dàlana amin'ny fitaterana
Karazana sy sandan'ny karama aloa amin'ny fandraisana anjaran'ny mpiasa sy ny mpampiasa
Karazana sy sandan'ny fanomezana fiarovana amin'ny sosialy
Karazana karazana sy sandan'ny karama rehetra nateraky ny tambin-karama (tandremo manokana raha marary ianao na misy lozam-pifamoivoizana any am-piasana)
Andron'ny andro fialantsasatrao sy ny habetsaky ny fanonerana ataonao mandritra io vanim-potoana io
Ny habetsaky ny hetra mihazona momba anao sy ny mombamomba ny vola tokony alohan'ny sy aorian'ny fisintonana
Vola azon'ny mpiasa tokoa ny habetsaky ny kajy rehetra
Miseho eo amin'ny payslip ny fampahalalana izay tsy misy na inona na inona
Tsy ara-dalàna ny manome anao payslip mampiseho ny fandraisanao anjara amin'ny fitokonana. Tsy azonay atao ny mandika ny sendikà. Ary amin'ny ankapobeny dia misy fampahalalana manitsakitsaka ny zon'ny tsirairay sy ny fahalalahana iraisana na olon-tsotra.
Teo alohaMialà tsy misy fanamarihana, zo ho an'ny vehivavy bevohoka
manarakaKaonty fanofanana manokana: ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao